"कोरोनालाई जितेका व्यक्तिहरूद्वारा प्लाज्मा दान अभियान शुभारम्भ"
# Kathmandu Metropolitian
Written By Ranjeet Bhandari
June 7, 2077
आफ्ना दुई परिवारका ७ जना सदस्यलाई कोरोना भाइरसले भेटेको थियो प्रकाश भुजेलज्युको। घरमै आइसोलेसनमा बसेर नेपाल सरकारले भने बमोजिमको सुरक्षा प्रक्रिया अपनाइ, तातोपानी, बेसारपानी, बिहानपख व्यायाम गरि बिफल बनाए कोरोनालाई, प्रकाश अनि उहाँका आफन्तजनहरुले।
त्यसैगरी सामाजिक सेवामा लागि रहँदा विद्यार्थी नेता एवं अनेरास्ववियूको केन्द्रिय सदस्य नारायण घर्तीज्यु पनि कोरोना भाइरसबाट अछुतो रहन सकेनन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता राधिका खतिवडाज्युलाई आफू कसरी कहिले कतिबेला कोरोनाबाट प्रभावित बनियो भन्ने कुरा पत्तै छैन। जब शरीर हलचलगर्न असहज भयो। जब घाँटी दुख्ने, रुघाखोकी देखिएर शंका लागेपछि परिक्षण गर्नुभयो। तब रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि उहाँ आफ्नो घरमा भिन्नै कोठा, भिन्नै शौचालय, भिन्नै खाना खाने प्लेटहरुको प्रयोग गर्नुभए पस्चात उहाँले आफू बाहेक आफ्ना परिवारका अन्य कुनै सदस्यलाई कोरोनाले छुन दिनुभएन। यसरी उहाँले कोरोनालाई चक्मा दिनुभयो।
नेपाल आइडलको फाइनल भइरहँदा जब फाइनलिस्ट मध्यका एक किरण भुजेलज्यु (रनर अप) को रिपोर्ट पोजेटिभ आयो। तब प्रतियोगिताको समापन भएको भोलिपल्टबाट नै उहाँ आफ्नो घरमा होम क्वारेन्टाइनको रुपमा रहेर सेल्फ आइसोलेसन गरि कोरोनाबाट जित हासिल गर्नुभयो।
उहाँहरु यश अभियानका प्रतिनिधित्व पात्रहरु हुनुहुन्छ। उहाँहरु जस्तै अन्य व्यक्तिहरुले आत्मविश्वास र शाहस पुर्वक कोरोनालाई हराएका छन्। यिनै विजेताहरुको समूह हो " मैले कोरोनालाई जिते, म गर्छु रक्त( प्लाज्मा) दान"।
आफू आइसोलेसनमा रहँदाको समयमा नै प्रकाश भुजेलज्यु मोटिभेट हुनुभइसकेको थियो। कोरोना बिरामीलाई समाजमा जस्तो व्यबहार गरिदै थियो, जसरी अपहेलना हुनुपरेको थियो तब आफू जस्तै अन्य व्यक्ति जो कोरोनाबाट ग्रसित छ्न् उहाँहरुको लागि केही सहयोग गर्ने योजना बुन्दै हुनुन्थ्यो प्रकाशज्यु।
त्यतिनैबेला कृतिपुर आइसोलेसनबाट सामाजिक संजाल मार्फत लाइभ आउनुभइ आफूलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको जानकारी दिनुभएका सिद्ध प्रसाद ढुंगानाज्युसंग प्रकाशज्युको चिनजान भयो। र कोरोना भाइरस पुर्ण रुपमा निको भएपछि अरु कोरोना सन्क्रमितको लागि केही मद्धत र सहयोग गर्ने योजना ठोस रूपमा बढ्दै गयो। अन्ततः निर्णय भयो कोरोनालाई पराजय गरे पश्चात कोरोनालाइ हराएका व्यक्तिहरुलाई प्लाज्मा दान गर्न आह्वान गर्ने। यसरी आइसोलेसनको बेडबाट जन्मियो "मैले जितेँ कोरोना, म गर्छु (प्लाज्मा) रक्तदान" अभियान।
यश अभियानमा सामाजिक संजालमा बनेको ग्रुपको आधारमा भर्टुअल बैठक बसि यश अभियान अहिले गतिप्राप्त गरेको छ। थप कसरी कोरोना विजेताहरुसंग सम्पर्क गर्न सकिन्छ, कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ त्यस्को सबै डिजाइनहरु योजनाहरु क्रमवद्ध रुपमा बनिरहेको कुरा यश अभियानका संयोजक प्रकाश भुजेलज्युले बताउनुभयो।
फलस्वरूप आजबाट कोरोना संक्रमणबाट निको भइ विजेता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले प्लाज्मा दानको अभियान सुरु गरेका छन् । आफू पुर्ण रुपमा निको भएपछि प्लाज्मा दान गरी थप चारजनासम्म कोरोना संक्रमितको जीवनरक्षा गर्न सकिने हुँदा निको भएका व्यक्तिहरूले आवश्यकताको आधारमा आज बुधबारदेखि शिक्षण अस्पतालमा प्लाज्मा दान अभियान सुरु गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा संक्रमीत भै मुक्त हुनुभएका अभियान्ताहरु मा. यज्ञ बोगटी, युवा नेता नारायण घर्ती, अधिबक्ता राधिका खतिवडा लगाएत करिब २० जना प्लाज्मा दाताहरुको उपस्तिथि रहेको कार्यक्रममा अस्पतालका तर्फबाट प्रसासकिय प्रमुख माधब प्र. घिमिरे, प्रबक्ता राम बिक्रम अधिकारी उपस्तिथि रहनुभएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै मा. यज्ञ बोगटिले कोरोनालाई त्रासको रुप बुझ्न नहुने तथा हेलचक्राई गर्न नहुने बरु उच्छ साबधानिका साथ बस्न सके सजिलै जितिने बताउनु भएको थियो।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका सूचना अधिकारी एवं प्रवक्ता रामविक्रम अधिकारीज्युले कोभिड– १९ संक्रमणबाट मृत्युसँग लडिरहेका बिरामीको जीवन बचाउन प्लाज्मा थेरापीले मद्दत गर्ने भएकाले प्लाज्मा दान अभियान सुरु गरिएको र प्लाज्मा संकलनका लागि अस्पतालमा प्लाज्मा बैंकको स्थापना गरिएको बताए ।
उक्त कार्यक्रम सन्चाल्न गर्दै अभियानका संयोजक प्रकाश भुजेलज्युले आफु र आफ्नो परिवार सन्क्रमित हुदा भोग्नु परेको पीडा र सामाजिक बहिस्कार अब हुनुहुने सन्क्रमितहरु ले भोग्न नपरोस भन्दै संक्रमण मुक्त ब्यक्तिले जटिल अबस्थामा रहनुभएका संक्रमितहरुलाई चडाईने प्लाज्मा थेरापिको लागि दाताको अभाब नबनोस भनेर सामाजिक चेतनामूलक कृयाकलाप गर्न अभियान सुरुवात गरिएको बताउनुभयो ।
‘मिल्नेले दान गरौँ नमिल्नेले उत्प्रेरित गरौँ सबै लागौँ सँगसँगै लागौँ’ भन्दै सुरु भएको यश अभियानमा संक्रमणबाट गम्भीर अवस्थामा पुगेका बिरामीको उपचारका लागि प्लाज्मा थेरापी महत्वपूर्ण हुने भएकाले आफूहरूले प्लाज्मा दान अभियानको सुरुवात गरेको युवानेता एवं अनेरास्ववियू केन्द्रिय सदस्य नारायण घर्ती ज्युले बताउनुभयो।
अभियानमा हाल्सम्म देशै भरिका करिब ४० जना सन्क्रमितहरु जोडिनुभएको छ भने तत्काल १६ जना दाताहरुले प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नु भएको छ। हालसम्म यहि अभियान अन्तरगत रहि ४ जना दाताहरुले प्लाज्मा दान गरिसक्नु भएको र आज सुभारम्बको अबसरमा अभियान्ता सिद्द प्र. ढुङ्गानाले O+ve प्लाज्मा दान गर्नु भएको थियो ।
सरकारले पनि परीक्षणको रूपमा बिरामीको स्वीकृति लिएर उपचार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले संक्रमण निको भएका व्यक्तिहरू पनि प्लाज्मा दिएर संक्रमणसँग लडिरहेका बिरामीहरूको जीवनरक्षा गर्ने अभियानमा जुटेका हुन् ।
पछिल्लो समय प्लाज्मा थेरापीबाट कोभिड– १९ संक्रमितको उपचार देशका धेरै अस्पतालले गरिरहेका छन् । यो अभियानलाई निकट भविस्यमा देशैभर सञ्चालन गर्ने संयोजक प्रकाश भुजेलज्युले बताउनुभयो।